ကဘူးလ်လေဆိပ်ပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွားလင့်ကစား ဗြိတိန်နိုင်ငံက အာဖဂန်ကယ်ဆယ်ပြောင်းရွှေ့ရေး ဆက်လက် လုပ်ဆောင်မည်ဟု ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား - Xinhua News Agency
ကဘူးလ်လေဆိပ်ပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွားလင့်ကစား ဗြိတိန်နိုင်ငံက အာဖဂန်ကယ်ဆယ်ပြောင်းရွှေ့ရေး ဆက်လက် လုပ်ဆောင်မည်ဟု ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား
လန်ဒန် ၊ ဩဂုတ် ၂၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်က ကဘူးလ်လေဆိပ်၌ အနည်းဆုံး လူ ၆၀ ဦးသေဆုံးကြောင်း သတင်းများဖော်ပြနေသည့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု နှစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့လင့်ကစား ဗြိတိန်နိုင်ငံ အနေဖြင့် အာဖဂန်၌ ကယ်ဆယ်ပြောင်းရွှေ့ရေး လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဩဂုတ် ၂၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။“ဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြိမ်းခြောက်မှုဟာ အကန့်အသတ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Operation Pitting စစ်ဆင်ရေးအောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ ကယ်ဆယ်ပြောင်းရွှေ့ရေးကို လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် အလေးအနက် ပြောလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အဲဒါအတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်ပါပြီ ။ ပြင်ဆင်ပြီးပါပြီ။”ဟု ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်က အရေးပေါ်အစည်းအဝေးပြီးနောက် သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်လေဆိပ်၌ ဩဂုတ် ၁၆ ရက်တွင် စုရုံးနေသည့် ပြည်သူများအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
“ပြီးတော့ ကျွန်တော် အသေအချာ ပြောလိုတာက ကျွန်တော်တို့ ဒီလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လက်လုပ်နေပါတယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို အဆုံးအထိ ဒါကို အဆုံးသတ်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကဘူးလ်လေဆိပ်၌ ဩဂုတ် ၂၆ ရက် ညပိုင်းတွင် ပေါက်ကွဲမှုနှစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အသေခံဗုံးခွဲသူများကြောင့်ဟု ဆိုသည်။ ပေါက်ကွဲမှုများအတွင်း လူ ၆၀ ထက်မနည်း သေဆုံးကာ ဒဏ်ရာရရှိသူ ၁၄၀ ဦး ရှိကြောင်း အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ အဆင့်မြင့်ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ BBC က ဖော်ပြခဲ့သည်။
“ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင် ဒီတိုက်ခိုက်မှုက ကျွန်တော်တို့ကို ကျန်နေသေးတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်နဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ဆက်လုပ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို ပြနေပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောကြားခဲ့ပြီး ဗြိတိနိုင်ငံသည် နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ဆက်လုပ်သွားမည်ဟု မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှ အမေရိကန်ဦးဆောင်သည့် တပ်ဖွဲ့များအတွက် ဘေးကင်းရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် တစ်ပတ်သာ ကျန်တော့သည်။ ဩဂုတ် ၂၄ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော G7 virtual summit အစည်းအဝေးအတွင်း ဗြိတိနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် နှင့် အခြား အမေရိကန်မဟာမိတ်ခေါင်းဆောင်များသည် ကယ်ဆယ်ပြောင်းရွှေ့ရေးအစီအစဉ် နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်အား ဩဂုတ် ၃၁ ရက်နောက်ပိုင်းအထိ တိုးမြှင့်ရေး အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်အား စည်းရုံးရာတွင် မအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်က ယင်းနေ့အစောပိုင်းတွင် ဗြိတိန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသူများအနက် အများစု ဖြစ်သည့် လူပေါင်း ၁၅,၀၀၀ ခန့်အား ကယ်တင် ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
LONDON, Aug. 26 (Xinhua) — British Prime Minister Boris Johnson said on Thursday that Britain will continue its evacuation operation at the Kabul airport despite twin bombings there that reportedly have killed at least 60 people.
“I want to stress that this threat ofaterrorist attack is one of the constraints that we’ve been operating under in Operation Pitting, in the big extraction that’s been going on, and we’ve been ready for it; we’ve been prepared for it,” Johnson told the reporters after an emergency meeting.
Johnson said earlier during the day that around 15,000 people — the “overwhelming majority” of those eligible to come to Britain — had been evacuated by the British troops. Enditem
Photo 1 – British Prime Minister Boris Johnson attendsavirtual summit of G7 leaders, in London, Britain, on Aug. 24, 2021. (Simon Dawson/No 10 Downing Street/Handout via Xinhua)
Photo2– File photo taken on Aug. 16, 2021 shows people gathering at the Kabul airport in Kabul, Afghanistan. (Xinhua)
ကဘူးလ်လေဆိပ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွင် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦးသေဆုံးပြီး ၁၅ ဦးဒဏ်ရာရကြောင်း တပ်မှူးကြီး ပြောကြား
ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် အခြေအနေ ဆက်လက်တိုးတက်လာသဖြင့် အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်မှ ပြောင်းရွှေ့
ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် ဆေးရုံတက်ပြီး ကျန်းမာရေး အခြေအနေစစ်ဆေးမှု ခံယူလျက်ရှိ